“Haddii uusan Awoowahey ahaan lahayn heer kama gaareen kubbada cagta.”. – Gool FM
“Haddii uusan Awoowahey ahaan lahayn heer kama gaareen kubbada cagta.”.
Byare September 15, 2017
(Madrid) 15 Sebt 2017. Marcelo ayaa markii uu heshiiska dheer ee ilaa 2022 la gaaray Real Madrid saxaafada la wadaay xusuuso qiiro leh oo ku aadan Awoowihiisa Pedro kaa oo door muhiim ah ka ciyaaray bilowgiisa ciyaarista kubbada cagta.
Daafaca reer Brazil ayaa la waydiiya saameynta uu Awoowihii ku lahaa waayihiisa ciyaareed, mana uusan ka labo labeyn inuu ku tilmaamo mid ka mid ah tirada ugu muhiimsan ee inoo u hor maro sida xirfadle kubbada cagta ah.
“Waxaan had iyo jeer ka fikiraa xusuusaha fiican,” Marcelo ayaa sidaa yiri.
“Wax xusuus oo xun kama heysto Awoowaheyga, maantana wuu ku farxi lahaa inuu arko inuu reerkeyga koray aana ku faraxsanahay shaqadeyda.
“Waxaan iminka Real Madrid joogaa 10 sano balse haddii uusan ahaan lahayn Awoowaheyga marna ma joogeyn halkan.”.
Kaamirooyinka oo soo qabtay Dani Carvajal oo ku kacay Fal Cunsurinimo ah!!!!